दुनियाँ नै चकित हुने यो एक घटना ! « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं । विश्वमा अनेक खालका घटनाहरु हुन्छन्, जसलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तै एक ड’रला’ग्दो तर सबैलाई चकित पार्ने घटना बाहिर आएको छ । ब्राजिलमा एक महिलाले एक पु’रुषको अ’ण्ड’को’ष नै चैट पारेपछि ब’बाल भएको हो । प्रहरीले यस घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ ।
त्यहाँको स्थानीय महिला ब्रुना भनेर चिनिने उक्त महिलाले सेप्टेम्बर ५ मा भएको यस घटनालाई स्वीकारेकी छिन् । तर उनले आफ्नो आ’त्मर’क्षा’का लागि मात्र गरेको बताएकी छिन् । उनका अनुसार ति पुरुषले उनलाई ‘रे’–प ‘गर्न खोजेका कारण उनले त्यस्तो ड’रला’ग्दो कदम उठाएकी हुन् ।
उनी भन्छिन्, ‘पेड्रो मेरा छिमेकी हुन् । उनी उत्तरी ब्राजिलको मिगुएल अल्वेसमा मेरो घरको श’य’नक’क्षमा आइपुगे ।’ त्यहाँ उनी अर्को मानिससँगै थिइन् । ति मानिसले लगत्तै उनीमाथि जा’इला’गेको उनको आरोप छ । त्यसबेलादेखि भाइरल भएको एउटा भिडियोमा उनी दावी गर्छिन् कि ति पुरुष दलाल हुन् । उनले ति मान्छेले आफुलाई ‘रे’–’प ‘गर्न बलपूर्वक ओछ्यानमा पुर्याएको आरोप लगाएकी छिन् ।
उनले आत्मरक्षाका लागि दुई पटक उसलाई ‘टो’–’के’को कुरा स्वीकारिन्, यद्यपि उनी भन्छिन् कि उनी जानकारी थिइनन् कि उनले ति पुरुषको ‘अ’ण्ड’को’षलाई ‘टो–कि’न् । स्थानीय रिपोर्टहरूले भने कि त्यो मानिस उसको पूर्व प्रेमी पनि हुन सक्छ र ईर्ष्याको कारणले उनीमाथि ह’म’ला गरेको हुनुपर्छ । तर ति महिलाले उनलाई डेटिङ गरेको कुरा अस्वीकार गरेकी छिन् ।’
कोरियरो ब्राजिलियन्सको ट्रान्सक्रिप्ट अनुसार उनी भन्छिन्, ‘ उनी (ति पुरुष) ओ’छ्यानमा ‘नां–गै’ थिए । मलाई त्यो मान्छेले जान दिएन् , अझ यसो भन्यो कि अब तिमी म सँग छ्यौ । उसले (आफ्नो ‘लिं–ग’) लियो र ममाथि ह’म’ला गर्न थाल्यो । जब उसले मेरो कपाल तान्दै थियो, तब उ मलाई तान्न खोज्दै थियो ।’
उनले थप्दै भनिन, ‘उ ओछ्यानमा पहिले नै ‘नाँ’–’गै’ थियो । ओछ्यानमा, मैले (उसको ‘लिं’–ग’) लिएँ र गएँ, जब मेरो कपाल त्यसरी ‘ता’नियो’ तब म तल झरेकी थिए र त्यसलाई ‘टो’–के’की थिए । किनकि महिलामा पुरुषको बराबर शक्ति हुँदैन, बुझ्नुभयो ? म उसको कमजोर बि’न्दुमा गएँ अनी मैले ‘टो–क’दि’ए ।’** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
डेली मेलको समाचार अनुसार ह’म’लापछि उक्त व्यक्तिलाई गम्भीर अवस्थामा अस्पताल लगिएको थियो । तर डाक्टरहरूले ‘अ’ण्ड’ ‘को’ष’ पुनः जोड्न सकेनन । ति व्यक्तिलाई टाँकाहरू लगाएर सोही दिन डिस्चार्ज गरियो । उनले दाबी गरे कि यो ह’म’ला उनका लागि कुनै आवश्यक थिएन् । जि–१ समाचार च्यानललाई उनले आफुमाथि जे भयो त्यस लायक आफु नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
ब्रूनाले अर्को समाचार साइट, मेयोनोर्तेलाई भने अनुसार उनी बच्चा हुँदा दुई पटक ‘ब–’ला’–त्कृत’ भएकी थिइन, र तेस्रो पटक ‘सि–का’र हुन अस्वीकार गरिन् । उक्त व्यक्तिकी बहिनीले ह’म’ला भएको केही दिन पछि सम्पर्क गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो ।
उनीहरुले त्यस मान्छेमा मेडिकल परीक्षण गरेका छन्, र पछि उनी र उनीसँग बयान पनि लिएका छन् । एक वा ती दुबैमाथि कारबाही गरिनेछ भनेर निर्णय अझै लिइएको छैन । यस घटनामा कस्को गल्ती भनेर प्रहरी आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।